Ayisafuni ukuphazamiseka manje iGalaxy - Impempe
Ayisafuni ukuphazamiseka manje iGalaxy
UMarlon Hueghs weTS Galaxy
Kungaba elikhulu ichilo uma kungase kube khona abadlali be-TS Galaxy abacabanga ukuthi umsebenzi usuphelile kule sizini ngenxa yefomu enhle yakamuva, ngokubona kukanozinti waleli qembu uMarlon Heugh.
Lo nozinti waseKapa ofike eGoli ezodlala kwiHighlands Park uthi ifomu yabo yakamuva iyabakhombisa izinga abangafika kulo yinqobo nje uma bengeke bazikhukhumeze.
Kusukela kufike u-Owen Da Gama kwiGalaxy umkhumbi uyanyelela ubheke phambili njengoba ewususe ekuvikeni ukugencwa yizembe wawubeka endaweni yesikhombisa kwi-log yeDStv Premiership.
Umdlalo olandelayo weGalaxy usekhaya neMaritzburg United ngoMgqibelo ngo-5 ntambama, eMbombela Stadium.
“Kuliqiniso ukuthi sidlala kahle muva nje kodwa lokho kukodwa akusho ukuthi sekufanele sizibone sibakhulu kunawo wonke umuntu okhona.
“Kusemqoka ukuthi siqhubeke nalokhu esesiqala ukukwenza manje (ukudlala ngokuzethemba kanjalo nokwethembana singabadlali).
“Sinabaholi abanele kuleli qembu futhi ngabo nobuholi babo singaya phambili kakhulu kunalapho sicabanga khona thina.
“Okufanele sikwenze manje ukuqhubeka nokudlala kahle singabe sisabheka emuva. Akukho futhi okufanele sikushintshe ngoba sithi sifuna ukwenza kangcono kepha kufanele sikhuphule amasokisi kulokhu ebesilokhu sikwenza kahle.
“Le fomu (yethu yakamuva) kufanele isikhombise ukuthi sinamandla kumbe amava okwenza kahle kangakanani uma sizinikele.
“Ayikho imidlalo okufanele siyithathe kancane kunemimye,” kuyaleza lo nozinti.
Nakuba engeke abhule ukuthi bazoqeda bekuphi kule sizini, uHeugh uthi konke kulele kubo.
“Sidlala kahle kakhulu futhi sesiyaqonda sonke ukuthi yini esiyifunayo nebhekeke kithi ngaso sonke isikhathi uma sisenkundleni. Yonke imidlalo kufanele ibe sengathi eyamanqamu manje bese sibeka uMdali phambili.
“Kuhle kakhulu ngoba sesiqala nokusondelana kunakuqala siyiqembu. Nakanjani lokhu kuzosenza sibe ngcono emizamweni yethu yokungavumi ukusuka kulo mgqigqo esikuwo,” kusho yena.
Ngokwalo nozinti, iqembu lidlala kahle kanjena nje, yingoba iGalaxy ayinalo ibhadi lokulinyalelwa abadlali basemuva.
“Sinenhlanhla ngoba izitobha zethu sezidlale ndawonye isikhathi eside ngaphandle kokuphazamiseka. Uma ninaleyo nhlanhla esikhathini esiningi konke kuyazenzekela,” kusonga lo nozinti.
Previous Previous post: Ubefuna ukuyobamba i-umbrella oweRoyal AM
Next Next post: Ingene emjahweni wesicoco seGladAfrica iFree State Stars ishaya iCT All Stars